Jeequmsa Yuunvarsitii Dabra Maarqositti uumameen barataan tokko ajjeefame, kaan madaa'an - BBC News Afaan Oromoo
Jeequmsa Yuunvarsitii Dabramaarqootti umameen walqabatee barattoonni sodaa nageenyaa guddaa keessa waan jirruuf gara qe'ee keenyaatti deebina jechaa jiru.
Barataa Seeraa Waggaa 4ffaa Abrhaam Hundumaa akka jedhutti gara maatii keenyaatti galuuf feenullee Yunvarsiitichi karra nurrati cufee nu dhorkaa jiru jedha. "Nuti barumsi nutti haa hafu malee dhiigni keenya akka saree bakka argetti dhangala'uurra, qee'ee keenyaatti galuu barbaanna."
Akka barataan kun jedhutti barattoota hedduu madaa'an keessaa lama miidhaa hamaan irra ga'ee hospitaalota Black Lion fi Baahir Daaritti wallaansaaf ergamaniiru.
Jequmsi barattoonni naannoo Amaaraa uuman kun kan jalqabaa miti kan jedhu Abrahaam, erga Jimaata darbeetii garuu cimee barattoota Oromoofi Tigiraay bakka arganitti reebanii caccabsuufi dhagaadhaan bubburuksuun hammaatee itti fufuu hima.
Akka inni jedhutti barataan Tigiraay kaleessa lubbuun darbes reebicha miidhaa irra ga'erraa kan ka'een.
Barattoonni naannoo Amaaraa Yunvarsiiticha keessa jiran maaliif isinirraa miidhaa geessisu gaaffii jedhuuf Abrahaam sababiin isaa maal akka ta'e akka hin beekne dubbatee, Sanbata darbe hiriira bahanii 'Abiyyiifi Lamaan nu hin bulchu' jechuudhaan sagalee dhageessisaa oolan jedha.
"Oromoon biyya maalitti beektee bulchiti, Oromoon garbummaa malee maalitti beekti," jechuudhaan yeroo hedduu arrabaan nutti darbanis callisnee mataa gadi qabannee barachuu barbaannus hin danda'amne jedha barataa Abrahaam.
Walitti bu'iinsa Yuunvarsitii Dabramaarqootti umamee tureen barataan tokko du'u barattoonni dallichaa BBC'tti himan. Barataan ajjeeffamees Sa'aara Abrihaa kan jedhamu yoo ta'u, barataa gosa barnootaa dinagdee [Economics] waggaa sadaffaati.
Jeequmsi yuunvarsitichatti guyyaa Jimaataa eegale hanga har'aattuu akka hin dhaabbatiin barattoonni ni dubbatu.
Dasaalawu Geetinat Yuunvarsitii Dabra Maarqoosiitti itti gaafatamaan Quunnamtii Ummataa fi Komunikeeshinii guyyaa Jimaataa sa'aatii 12 irraa eegalee jeequmsi dhaabbaticha keessatti eegalame hanga ammaatti akka hin dhaabbatiin mirkaneessaniiru.
Walitti bu'insichaan ijoolleen lama dhagaa fi meeshaa qara qabuun rukutamusaanii namoonni ijaan argan himaniiru.
Miidhaa irra qaqabeen barataan tokko battalumatti lubbuusaa yoo dhabu barataan kan biraa ammoo wallaansaaf gara hospitaala Baahir daariitti geeffamu baruun danda'ameera.
Maddi walitti bu'insaa maal akka ture hanga ammaatti baruu hin dandeenye kan jedhan itti gaafatamaan quunnamtii ummataa, guyyaa Jimaataa haalicha keessatti hirmaataniiru kan jedhaman ijoollee muraasa poolisiin hordoofuun dallaan alatti qabee buufatatti akka argamaniifi haalli isaanii qulqullaa'aa waan jiruuf isaan booda sababiin adda kan bahu ta'u himaniiru.
Wayita ammaa kanattis barattoonni galma yuunvarsitichaa keessatti dahatan kan argaman kan himame yoo ta'u, barattoonni kalleessa reeffa barataa ajjeefamee gaggeessuuf walitti qabamanii turanis 'barnoonni nutti haa hafu gara dhufneetti nu gaggeessaa' jechuun pirezidaantiif gaaffii dhiyeessu isaanii barattoonni nutti himaniiru.
Ammaan tana jeequmsi hin jiru. Barattoonni garuu gara barnootaatti hin deebine. Sababii jeequmsaa adda baasuun fala barbaachuuf poolisii walliin ta'uun hojjanna jechuun himan itti gaafatamichi.
Walitti bu'insichi sababii miti kan jedhan itti gaafatamtichi, boruu eegalee baruu barsiisuun kan itti fufu ta'us himaniiru.
Reeffii barataa ajjeefamee qorannoof gara Finfinneetti ergame ture, har'a sa'aa booda bakka dhalootaa isaa Tigiraayi Magaalaa Shiree Indasilaaseetti kan ergamu ta'usaa barattuun maqaanshee akka eeramu hin barbaannee tokko dubbatte jirti.
Damee walitti dhufeenyi Itoophiyaafi Keenyaa irratti laafe